कोरोनाले भारतमा तोड्यो सबै रेकर्ड - Everest Dainik - News from Nepal
कोरोनाले भारतमा तोड्यो सबै रेकर्ड
काठमाडौंः आइतबार एकै दिन भारतमा ५ हजारभन्दा धेरै कोरोना संक्रमित फेला परेका छन् ।
भारतमा आइतबार ५ हजार ५० जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन । योसँगै त्यहाँ संक्रमितको संख्या ९५ हजार ६ सय ९८ पुगेकोे छ ।
भारतमा कोरोनाका कारण ३ हजार २५ को मृत्यु भएको छ । आइतबार मात्रै १ सय ५४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस टी–२० सिरिजः भारतलाई आज ब्याटिङको निम्तो, प्लेइङ ११ मा को–कोले पाए मौका ?
आइतबार २४ घण्टाको अवधिमा सबैभन्दा बढी संक्रमित र मृतक थपिएका छन् । योसँगै भारतले कोरोनामा सबै रेकर्ड तोडेको छ । एकैदिन अहिलेसम्मकै बढी संक्रमित र मृतक थपिएसँगै यसअघिका सबै रेकर्ड तोकिएका हुन् ।
संक्रमितमध्ये ३६ हजारभन्दा धेरै उपचारपछि निको भएका छन् । भारतले शुक्रबारबाटै कोरोना संक्रमणको सुरुवाती केन्द्र चीनलाइ उछिनेको थियो ।
याे पनि पढ्नुस भारतमा घटदै कोरोना, मृत्यु भने दैनिक ४ हजार
भारतमा कोरोना संक्रमण व्यापक बन्दै गएसँगै भारत सरकारले पुनः लकडाउनको अवधि २ सातासम्म बढाएको छ । भारतको गृह मन्त्रालयले गत २४ मार्चदेखि लागू गरिएको लकडाउनलाई ३१ मेसम्म जारी राख्ने निर्णय गरेको छ ।
भारतमा पछिल्लो समय तीव्र रुपमा संक्रमितहरू बढ्दै जाँदा विश्वभरमै ११ औं स्थानमा आइपुगेको छ ।
याे पनि पढ्नुस भारतमा कोभिड–१९ सङ्क्रमण र मृत्युदरमा सामान्य कमि
कहाँ कति संक्रमित र मृतक ?
ट्याग्स: Corona India, भारत